2 Tantara 12 - Ny Baiboly
2 Tantara toko 12
Nanompo sampy Roboama - Nibosesika Sesàka - Maty Roboama.
1Nony nohamafisin'i Roboama ny fanjakany sy nahazo hery izy, dia nahafoy ny lalàn'ny Tompo izy mbamin'Israely rehetra. 2Tamin'ny taona fahadimy nanjakan-dRoboama, dia niakatra Sesàka mpanjakan'i Ejipta hamely an'i Jerosalema noho izy ireo nanota tamin'ny Tompo. 3Nitondra kalesy roan-jato amby arivo, mpitaingin-tsoavaly enina alina izy, ary tsy tambo isaina ny vahoaka momba azy avy any Ejipta, dia ny Libiana, ny Sokiana, ny Etiopiana. 4Afany ny tanàna mimanda tamin'i Jodà, ary tonga hatrany Jerosalema izy.
5Dia tonga Semaiasa mpaminany, nanatona an-dRoboama sy ny filohan'i Jodà, izay tafangona tao Jerosalema, noho i Sesàka efa akaiky, ka nanao tamin'izy ireo hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Efa nahafoy ahy hianareo, ka dia mba afoiko kosa ho eo an-tanan'i Sesàka. 6Ary nanetry tena ireto filohan'Israely sy ny mpanjaka, ka nanao hoe: Marina Iaveh! 7Nony hitan'ny Tompo fa nanetry tena izy ireo, dia tonga tamin'i Semaiasa ny tenin'ny Tompo nanao hoe: Efa nanetry tena izy ireo, ka tsy handringana azy aho: fa tsy ho ela, dia homeko ny fanafahana izy ireo, ary tsy hanampatra ny hatezerako amin'i Jerosalema, amin'ny tànan'i Sesàka aho. 8Kanefa hanompo an'io ihany izy ireo, mba samy ho fantany na ny manompo ahy na ny manompo ny fanjakan'ny tany.
9Dia niakatra namely an'i Jerosalema Sesàka mpanjakan'i Ejipta, ka namabo ny rakitry ny tranon'ny Tompo sy ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka, nataony mafafa. Nobaboiny ireo ampinga volamena nataon'i Salomona. 10Ampinga varahina no nataon-dRoboama mpanjaka solon'ireo, dia napetrany teo an-tanan'ny lehiben'ny mpihazakazaka izay niambina ny fidirina amin'ny tranon'ny mpanjaka. 11Ka isaky ny nankao an-tranon'ny Tompo ny mpanjaka, dia tamy ny mpihazakazaka mitondra ireo, vao mamerina azy ho ao an'efi-tranon'ny mpihazakazaka indray. 12Noho Roboama nanetry tena, dia niala taminy ny fahatezeran'ny Tompo, ka tsy dia tena rava izy, ka mbola nisy zavatra tsara ihany tamin'i Jodà.
13Ary nitombo hery tao Jerosalema Roboama mpanjaka, ka dia nanjaka. Iraika amby efapolo taona izy, fony vao nanjaka, ary fito ambin'ny folo taona no nanjakany, tao Jerosalema, ilay tanàna nofidin'ny Tompo tamin'ny fokon'Israely rehetra, hametrahana ny anarany. Naamà, Amonita, no anaran-dreniny. 14Nanao ny ratsy izy, satria tsy nandraikitra ny fony amin'ny fitadiavana an'ny Tompo.
15Ny asa nataon-dRoboama, na ny voalohany na ny farany, moa tsy efa voasoratra ao amin'ny Tenin'i Semaiasa mpaminany, sy ny an'i Adao mpahita, momba ny tetiaram-pirazanana? Niady mandrakariva Roboama sy Jeroboama. 16Ary nodimandry any amin'ny razany Roboama ka nalevina tao an-tanànan'i Davida. Abià zanany no nanjaka nandimby azy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0061 seconds